ညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများ:၃၂+Xxx သင်ျ Playables
အကြားနှောင်ကြိုးတစ်ဦး၏အစ်မနှင့်ညီအစ်ကိုတစ်ဦးအရာတစ်ခုခုသည်အမှန်တကယ်ထူး:လူတိုင်းသိတယ်ဒီအခါအမှုအရာရႏွင့္-သတ်မှတ်ထားသူတို့ကိုအကြား၊အဘယ်သူမျှမကစိုးရိမ်ပူပန်သင့်ပါတယ်! ကျွန်မတို့သိတဲ့အတွက်လူအများကြီး၊အများ၏စိတ်ကူးပယ် jerking အချို့သင်ျအရေးယူအဝေးလွန်းသွားပြီသူတို့အဘို့အ:သို့သော်၊သင်ဆိုရင်တစ်စုံတစ်ဦးနိုငျသောအစာအိမ်အလွန်ကြီးစွာသောမိသားစုလိင်၊ကျနော်တို့ရရှိပါသည်သင်ဖုံးလွှမ်း! မသွားဘူးကြောင်းစဉ်းစားဒီဗြီဒီယိုတယ်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုကြောင်း၏သဘောသဘာဝ၊သော်လည်း:ကျနော်တို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်သင်ဗီဒီယိုဂိမ်းများဒီမှာ!, မှန်–အလွန်အလှန်အတွေ့အကြုံဖူးအတူကစားအတူခေတ်ရေစီးကြောင်းအလေးပေးနှင့်ကောင်းစွာ၊ကိုယ့်အပြောနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးလိမ်၊သင်သွားဘယ်တော့မှမဖွင့်ပြီးမှနောက်ကျောသွားကြဖို့နောက်ထပ်ပုံစံသို့မဟုတ်အစားဖျော်ဖြေရေး၏။ ညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းသူ့ဟာသူတည်ထောင်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အခွင့်အာဏာအတွက်ဤအစိတ်အပိုင်းမှကြွလာသောအခါအရသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအကြားသွေးညီအစ်ကိုမောင်နှ:ဟုတ်ပါတယ်၊အဆုံးစွန်သောရေးအတွက်တားမြစ်ထားပါတယ်စုတ်သွားမယ့်အရူးသင်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်သင်ပစ်ခတ်မှုဝန်ကဲ့သို့သင်တို့မယုံကြည်မယ်လို့!, ဒါဟာယုတ်ပစ္စည်းပစ္စယ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရန်တာပေါ့ရချင်တယ်အဖြစ်အများကြီးအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်အဖြစ်။ ဒါကြောင့်၊အတူခံစားရယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းများအတွက်စမ်းသပ်မောင်းနှင်? သင်သိချင်ရှုပ်ပယ်တနေ့လုံးဒီကြယ်မောင်နှမလိင်ဂိမ်းများ။
ငြီးငွေ့သွားညမ်းဂိမ္းကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့သဘောပေါက်ကြောင်းသူတို့အားလုံးဆီမှာအတိအကျတူညီသောအကြောင်းအရာထဲမှာ? ကောင်းစွာ၊အဘယ်အရာကိုကြီးမြတ်ရဲ့အကြောင်းကိုညီအစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါသည် ၁၀၀%သီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်။ ဆိုလိုတာကကျွန်မတို့အားလုံးအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်း၊နှင့်အခြားမည်သူမဆိုသင်ပေးနိုင်ဖို့လက်လှမ်း။ ဒီဘက်ပါ၊သင်သေချာပါသငျသညျခဲ့ဖူးပါဘူးလိုလျှင်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ထိုသို့ဖြစ်မသွားမယ့်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်အတွေ့အကြုံသင့်အဘို့အတိုင်းတစ်ခုတည်းအဆင့်အလမ်း။, ငါတို့သည်လည်းညီဂိမ်းများပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာငါ့ကိုယုံကြည်သောအခါကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရှိသည်လိမ့်မယ်သင်ပစ်ခတ်မှုဝန်ကဲ့သို့သင်တို့မယုံနှင့်အတူရည်ရွယ်ချက်မှာသက်သက်၏အရည်အသွေးခေါင်းစဉ်များကို။ အခြားအစက်အပြောက်ထွက်ရှိစေခြင်းငှါဆိုကြသည်ရောက်စေဖို့သင်အကောင်းဆုံး XXX ဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရးတတ်နိုင်သမျှ၊သို့သော်မည်သို့ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုအမှန်တကယ်ပြုပါ?, မဒီဟန်တစ်စက္ကန့်အဘို့အကျနော်တို့အကောင်း:ငါကလည်းင့်ရှေ့တော်၌ငါပြောလိမ့်မယ်၊အစ်ကိုအစ်မလိင်ဂိမ်းများအကြောင်းကိုအားလုံးသင်သို့ဆောင်ခဲ့၏အကောင်းဆုံးမှာအပြာဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရးအတူတင်းကျပ်တဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သင်ျသင်သိရှိလာနှင့်ချစ်ခြင်း။ ဒီ weaponized မိသားစုလိင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ပါတယ်–အပူနှင့်အရသာ၊ပဲအတူ!
ကျနော်တို့လက်ရှိတွင်ပေါ်ထိုင်တဲ့စာကြည့်တိုက်၏၃၂ ဂိမ်းများ၊တော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်ချိုမြိန်၊မှန်သော? ကောင်းစွာ၊ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကပထမအသုတ်ကျောင်း၏စက်တင်ဘာလအတွင်း ၂၀၁၆ နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီ solidly ထိုကတည်းကပေးရဖို့ဂိမ်းထွက်ရှိဖျော်ဖြေရေးအဖြစ်အများကြီးအဖြစ်တတျနိုငျ။ ကြောင်းကိုငါသိ၏ကျေးဇူးပြုပြီးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စအမျိုးမျိုး၊ကျွန်တော်တို့ဟာပေးအမျိုးမျိုး၏နံပါတ်အဘော်နှင့်သဘောတရားသောစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်၊သင်အလွန်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်အကြာလာ။ ငါသည်အဘယ်သို့ဆိုလိုဘူး၊အတိအကျ?, ကောင်းစွာ၊အကယ္၍သာတတ်နိုင်ရောက်စေ ၅ သို့မဟုတ်ဤမျှဂိမ်း၊အခွင့်အလမ်းတစ်ခုသာမောင်နှံသည်အမှန်တကယ်အယူခံဝင်ဖို့အဘယ်အရာကိုသင်ကြိုက်ထံမှသင်ျလွှတ်:အစေချင်သောအားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရှောင်ရှား၊ကျွန်မအထင်ကျွန်တော်ပြုမိပါပြီ၊တစ်ဦးကောင်းအလုပ်သို့ဝေးအများပေးခြင်းတစ်လျောက်ပတ်အမျိုးမျိုးသင်ျကျင်း၊တည်နေရာ၊မြေကွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း။ ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ပြီပြုပါရန်လွယ်ကူသောအရာ၊သို့သော်လည်းအဆုံးရလဒ်သည်တရားမျှတကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ၊အနိုင်သူအကြောင်းတိုင်ကြား ၃၀+သင်ျခေါင်းစဉ်အားလုံးသင်ဆောင်အများဆုံးနှိုးဆှ၏အစ်မအပေါ်အစ်ဖ်ာ္ေျဖေရး?, ငါဟာအရူးပြောတဲ့အခါအဲဒီအစက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်အတန်းသောအခြားအရာအားလုံးထွက်ရှိရမည်မှတက်အသက်ရှင်နေထိုင်။ အထင်တယ်မှယူသောအရာကိုမွေ့လျော်ငါတို့ပြီးပြည့်စုံသောစုဆောင်းခြင်း? ကံကောင်းပါစေရန်ကြိုးစားနေပြီးပြည့်စုံသောတပြင်လုံးကိုအလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်နှမလိင်ဂိမ်းများ–ဒါဟာတကယ့်ကိုမလွယ်တဲ့အတွက်သေချာ!
ထွက်ရှိပါတယ်လူတိုင်းသိတယ်အစ်ကိုညီအစ်မလိင်ဂိမ်းများအမှန်တကယ်အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးအဘို့လက်ငင်းလက်လှမ်းဖစ္မွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု။ ကျွန်တော်တို့မှာကဟန်တစ်စက္ကန့်အဘို့အကြောင်းမသင်ပေးနှင့်အတူအစွမ်းကုန်အဆင့်ဆင့်၏အပျော်ကြောင့်၊ငါ့ကိုမယုံပြောတဲ့အခါ:ကျနော်တို့လုံးဝ! ဒါလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြီးအကျယ်ထောက်ခံလာအဘယ်အရာကိုမြင်များအားလုံးပျော့သည်။ ဖြစ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုအတွက်နှင့်အတူမည်သူမဆိုသည်တပ်မက်တစ်ဦးချင်းမင်းဂိမ်းမှမပေးတယ်စမ်းကြည့်–လာမယ့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်လမ်းတစ်လျှောက်နှင့်သတိရ;အဘယ်သူမျှမကအညစ်ညမ်းဂိမ္းဆြုံးသင်အလိုရှိသောအတော်လေးတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကပါဘူး။, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်ပြန်လာသငျလိုမဆိုအချိန်ညှစ်ဖို့သင့်ဝက်ကျော်အချို့ XXX ဂိမ်းအရေးယူအခြေအပေါင်းတို့ပတ်လည်မှာတောက်ပသင်ျ။